တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ကျမနှင့် ပါးကွက်ယဉ်ကျေးမှု
Posted by မေဓာဝီ at 9:33 AM
ဟနလည်းအမြဲပါးကွက်ကြားနဲ့ပဲ။ ဒါပေမယ့်ဟနက ညီညီလေးကြားတာ။
နိုင်ငံခြားမှာလည်း တခတခပါးကွက်နဲ့အပြင်ထွက်တယ်။ လူတွေဝိငြ်ြး ကည့်တယ်။ မနေနိုင်တဲ့သူကမေးတယ်။ ပြန်ဖြေလိုက်တာပေ့ါ။ မြန်မာ့ရိုးရိုး ဆေးဘက်လည်းဝင်တဲ့ အလှပြင်တဲ့ပစ်စည်းလို့။
မန်မာပြည်မှာနေတုန်းက စနေလဲ အမြဲပါးကွက်ကြားပဲ မမေ..
မှတ်မှတ်ရရ ရန်ကုန်စရောက်ဖူးတုန်းက ပါးကွက်ကြားနဲ့မို့ (ရန်ကုန်)သူငယ်ချင်းက
တောသူမလို့ ပြောခဲ့ဖူးတယ်။ ထိုင်ဝမ်ရောက်တဲ့ အထိ ကျောက်ပျဉ်နဲ့ သနပ်ခါးတုန်းပဲ။
အဲဒီမှာလဲ ရောင်းတယ်လေ။ ခုတော့ ရယ်ဒီမိတ်ပဲ လိမ်းရတော့တယ်။
အိကတော့ သနပ်ခါးလိမ်းရမှာ ပျင်းတယ်။ သနပ်ခါးမှ မဟုတ်ဘူး။ ဘာဆိုဘာမှ လိမ်းဖို့ကို စိတ်မရှည်တာ။ ငပျင်းဂျီးပေါ့ ဟဲ ဟဲ။ ဒါပေမယ့် အမေ သနပ်ခါးလိမ်းထားရင် သနပ်ခါးပန်းလေး ပန်ထားရင် အမေနားပဲ ကပ်ကပ်ပြီး သဘောကျနေတတ်တယ်။ အဲလိုပဲ သနပ်ခါးလေးနဲ့ လှနေတဲ့ ကောင်မလေးတွေကိုလဲ သဘောကျတယ်။ ကိုယ်တိုင် မလိမ်းပေမယ့် အမေလိမ်းဖို့ သနပ်ခါးမွှေးမွှေးလေး ကျောက်ပြင်ပေါ်မှာ သွေးပေးရတာလည်း သဘောကျတယ်။ မတရားတွေ စွတ်ရွတ်သွေးလို့ အကုန်အကျများတယ်လို့ ဆူခံရသေးတာ။ အိတို့ကျောင်းတုန်းကတော့ မိန်းကလေးတွေ သနပ်ခါးမလိမ်းမနေရ စည်းကမ်းနဲ့ နေရလို့ ပြသနာတွေကို များနေတာပဲ။ အိအသားအရေက ဘာမှမလိမ်းရင် တော်သေး တစ်ခုခု သွားတင်လိုက်ရင် ၀က်ခြံပေါက် တတ်တယ်။ မျက်နှာပြောင်ကြီးနဲ့ နေတတ်ပေမယ့် သနပ်ခါးနံ့ စစ်စစ်လေးကို ကြိုက်တယ်။ ရင်ကိုအေးစေတယ်နော်။ မမေရဲ့ ဒီ စာလေးကို ဖတ်ပြီး သနပ်ခါးလိမ်းချင် စိတ်တောင် ပေါက်သွားတယ်။ ပျင်းလို့သာ။
သနပ်ခါးအကြောင်းတွေ ရေးထားတော့ ကျနော် လူပျိုပေါက် အရွယ်က သနပ်ခါးကြောင်ကျားနဲ့ ဂိုက်ထုတ်ဖူးတာကို သတိရတယ်.. တချို့ ယောက်ျားလေးတွေလဲ သနပ်ခါးလိမ်းကြတာကိုး.. ကျနော်ကတော့ ပါးကွက်မကွက်ပါဘူး.. ကြောင်ကြောင်ကျားကျားတွေ လျှောက်လိမ်းတာလေ.. ဒါပေမယ့် မြန်မာမိန်းကလေးတွေ သနပ်ခါး ပါးကွက်ကျားလေးနဲ့ လှတာကိုတော့ မိတ်ကပ်တွေထက်စာရင် ပိုသဘောကျမိတာ အမှန်ပဲ..
Ya..me too..I also prefer Tha Nat Khar rather than make-up.
ma may ye, tha nat khar saung par phat pee, pa kut kyar ne, twe nyo ko tha di ya dal byar . he'he' . . khu hma pyan twe pee, twe nyo ye, dhat pone the hmar, ma nat khar twe ne so dar tha di thar mi dal..ko yin kyay hmu ne ko pe , kg dal byar.. myanmar pyi taung po lwan mi b..edar ma may ye, tha nat khar , saung par kyaung bya. . ma may go ta yar khan shar tel lo taw ma pyaw ne naw,, thanks for , saung par, tha nat khar.....
12/08/2006 7:45 AM